Vanhu vazhinji vatanga kushandisa Microsoft Edge seye yavo yekutanga browser paPC. Sezvo bhurawuza iri paunenge uine ese mapassword ako akachengetedzwa uye wakapinda mawebhusaiti akawanda, kusanganisira vezvenhau, zvakakosha kuti uzvidzivirire kubva mukubvumidzwa kusingatenderwe. Kana iwe uchida kuchengetedza yako yakavanzika yedata, zvinokurudzirwa kuchengetedza bhurawuza ne password. Pazasi pekuti unogona sei… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekukiya Microsoft Edge nePassword Dziviriro
Microsoft yakazivisa kuti iri kuwedzera iyo Kids Mode pane yayo Edge web browser kuti ive yakachengeteka kubhurawuza. Sekureva kwekambani, izvi zvichaita kuti vana vatarise pawebhu nenzira ine hushamwari, inogadziriswa. Iyo modhi parizvino iri kuburitswa muUS Chirungu pane ese ari maviri Windows uye macOS. Iyo nyowani Yevana Mode ichawedzera dzinoverengeka "chengetedzo dzekuchengetedza" kuona kuti vana vachivhura… [Verenga zvakawanda ...] nezve Microsoft inounza Vana Mamodhi kune vese vashandisi veEdge: Maitiro ekuigonesa
Paunenge uchitsvaga neMicrosoft Edge, iwe dzimwe nguva unofanirwa kutangazve muchina wako kana kubuda kunze uri pakati pebasa rakakosha kana maitiro ekutsvaga. Neraki, pane nzira yekuudza Edge kuti iwe unoda kuchengetedza ako ese tabo uye kuvhurazve iwo inotevera nguva yaunotangazve. Heano maitiro ekumisa. Kutanga, vhura Edge. Mune chero hwindo, tsvaga iyo ellipses bhatani (matatu madota) mu… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekugadzira Edge Nguva Dzose Kuvhura neako Akambovhura Tabhu